I-Semalt inikeza izizathu ezivakalayo zokusebenzisa i-Twitter eklasini
Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba i-Twitter yenye yezona ndawo ezidumileyo nakwezinye izithambile zewebhu. Inethiwekhi engakholisi enezixhobo ezininzi zokuncedisa bobabini abaqeqeshi nabafundi badibane.
Okwangoku, i-Twitter iye yaba yindawo enesiphephelo senzululwazi yoluntu xa ifika kumashishini, ukukhuthazwa kwesayithi, izizathu ezingenzi nzuzo, iziganeko kunye nemfundo. Lapha, u-Andrew Dyhan, uSemalt uMphathi weNtengo kaMthengi we-Semalt, uthethe ngendlela ephawulekayo yokusebenzisa i-Twitter eklasini ngendlela engcono.
Iiklasi zeZiko kunye neZaziso
Enye yeenzuzo ezilungileyo kunye ezimangalisayo zokusebenzisa i-Twitter eklasini kukuba yenza iziganeko zeklasi kunye nezipapasho lula kwaye zikhawuleza. Unokwabelana ngolwazi malunga neziganeko ezizayo, iimvavanyo, imibuzo kunye nayo yonke into ovakalelwa ngayo kubalulekile kubafundi - den umzug. Unokusebenzisa i-Twitter ukuthumela iiprojekthi, izabelo kunye neemeko ezizodwa kwi-intanethi. Imihla yokuhlolwa ingabhengezwa ngolu xwebhu lwezobuntu. Abafundi be-Oldуs banokuthintana nabafundi abatsha, kwaye bonke banokuqhagamshelana ngamaphepha kunye noluntu kwi-Twitter.
Ukukhuthaza iingxoxo eziqhubekayo
Ootitshala bethu nabafundi banokukhuthaza iingxoxo eziqhubekayo kwi-Twitter xa iseshoni iphelile. Oku kuya kunceda abasandul 'ukuza bafunde izinto ezininzi ezintsha. iinkcukacha kwaye zifake zilayishwe kwi-Twitter. Abafundi abahlukahlukeneyo abakulungele ukufumana ukungeniswa kwiikholeji yakho bazuze kule vidiyo kunye nama-audios.Ikunceda abafundisi ukuba bazi yonke into malunga neziphoso zabo kunye neengxaki zabafundi.
Ulandelelwano lweMisebenzi yomsebenzi
Abafundi abaselula abahlola imisebenzi eyahlukeneyo kunye nemimandla banokufumana ulwazi kunye nomxholo ochaphazelekayo kwi-Twitter. Ootitshala, kulula kakhulu ukwabelana ngezinto ezincedo kwi-intanethi ukwenzela ukuba abafundi abaninzi banokuzuza. Ngamanye amazwi, sinokuthi i-Twitter yindlela ehle kakhulu yokusebenzisana nootitshala bakho okanye abafundi ukuze uncede omnye nomnye ukhethe umsebenzi ofanelekileyo. Ngethuba le-Twitter, ootitshala bethu banokufundisa abafundi babo kwaye babelane ngokuthunyelwa kwemisebenzi ngaphakathi nangaphandle kwenkampu ukwenzela ukuba bangenise izicelo zabo ngokufanelekileyo.
Kootitshala, kulula kakhulu ukudala nokwabelana ngokubhaliweyo kokusebenzisa i-intanethi. Kunokuba uthumele iiprojekthi kubo bonke abafundi, ngesandla sethu, ootitshala bethu bangawalayisha kwi-Twitter ukuze abafundi be-camp-out-campus bafunde into entsha ukusuka kule mizivo. Mema abafundi ukuba bathathe inxaxheba kulezi zifundo ngaphakathi nangaphandle kweklasi, kwaye zibenze zifumaneke kwi-Facebook kunye ne-Twitter. Qinisekisa ukuba ufake ihahtag ezifanelekileyo kwii-tweets ukuze umxholo wakho uhlale ukhona kwinani elikhulu labantu.
iBlogging kunye neMedia Media
Ootitshala bethu banokufundisa abafundi babo indlela yokufumana imali kwi-intanethi nge-Twitter. Yingxenye enkulu yokwabelana ngezithuba zakho zeblogi kwaye ubandakanye abantu abaninzi nangaphezulu. Kwi-Twitter, kubalulekile ukubhala amabali asebenzayo akhuthaza abantu abaninzi ukuba bathathe inxaxheba kwiikholeji zakho ze-inthanethi nakwi-offline.